Fetiraiza nokuti miriwo mapindu - China Qingdao King Good New Materials
Panyaya kukura zvokudya utano yako, zvakanaka kushandisa zviwanikwa, makemikari fetiraiza. Ndinoziva Organic zvegadheni anogona kuridza kutyisa, uye vanhu vanowanzofunga kusvika nokuti makemikari nhumbi nokuti zvinoratidzika nyore. Asi kushanda pamwe zvakasikwa, uye kushandisa makemikari fetiraiza mubindu hakusi hutano chete nesu, chaizvoizvo anoshanda nani.
Hazvina kuoma kuti avake akapfuma, makemikari ivhu paminda yenyu. Imwe nzira nyore kuzviita kuti chinatsai ivhu wako mufudze nezvimwewo Organic zvinhu nguva dzose. Musafunganya, nekugadzirisa ivhu hazvirevi kuva zvakaoma. Kuti chinatsai ivhu renyu unogona kushandisa zviwanikwa, makemikari fetiraiza kuti miriwo mapindu - kufanana mufudze iwe unozviita kana kutenga kuchitoro, kana unogona kutenga zvigadzirwa zvakafanana honye castings, composted mupfudze, kana vezvokutengeserana makemikari mubindu fetiraiza. Unogona kunyange kutenga makemikari miriwo mubindu fetiraiza akafanana Healthy Zvikure makemikari miriwo fetiraiza kana Sustane zvose zvakasikwa chirimwa zvokudya, kutaura nyore!
Related Post: 6 Zvinhu miriwo yose zvitsva murimi anofanira kuziva
Kune matani zvinoshamisa nzira kuti makemikari mubindu fetiraiza kutengeswa mazuva ano, uye vari nakisa nyore kushandisa. Unogona kuwedzera Organic kunonoka kusunungurwa fetiraiza mumunda pamberi pakudyara, kana urisase panhivi mujinga enyu makwenzi uye muvare nayo muvhu. Chero nzira, yako nemiriwo vachabatsirwa tainge kudya kunovaka.